မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းရမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းရမည်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Sep 22, 2013 in Creative Writing | 13 comments
ဆောင်ပုဒ်အများဆုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို့အဆိုရှိပါတယ်။ ကျွန်မလေ့လာကြည့်သလောက် တကယ်လဲဆောင်ပုဒ်တွေများပါတယ်။ အဲဒီဆောင်ပုဒ်တွေကို လိုက်နာသလား၊ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းဖြစ်မြောက်သလားလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာလဲ တခုမှဖြစ်မြောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။ အခုလဲ Sea Game ကြီးနီးလာတာနဲ့အမျှ အားကစား ဆောင်ပုဒ်တွေလဲ နေရာတိုင်းတွေ့လာရပါတယ်။ မရိုးနိုင်တဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းရမည် နဲ့ မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာသို့ ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေပါပဲ။
ကျွန်မသားလဲ မဖြစ်ညစ်ကျယ်အားကစားလုပ်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ သူထိုင်ဂိမ်းနှိပ် တီဗွီကြည့်နေမှာစိုးတဲ့ အတူတူကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါစေဆိုပီး လွှတ်ထားပေးပါတယ်။ သူကတော့ ရေကူးနဲ့ ကြက်တောင် လုပ်ပါတယ်။ ရေကူးကတော့ မန်ဘာဝင်ပြီး တပါတ်နှစ်ရက်လောက် ရေကူးကန်ပို့၊ ကိုယ်ကထိုင်ကြည့်ပြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူသိပ်စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ကြက်တောင်ကိုပိုအားသန်ပါတယ်။ ကြက်တောင်ကကျတော့ ကျောင်းမှာပဲရိုက်ရတော့ သူက Club ၀င်ချင်တယ်ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့ နှစ်လမ်းထိပ် မှာ မြန်မာနိုင်ငံကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှဟီးနေတာပဲ။ ခန့်ညားလိုက် တဲ့အဆောက်အအုံ။ ကျွန်မလဲတွေးပါတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရိုက်တာထက်စာရင် ကြက်တောင်အဖွဲ့ချုပ်မှာရိုက်တာက တကယ့်ကိုနည်းစနစ်နဲ့ တော်တော် အဆင့်မြင့်မှာပဲလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေအဖွဲ့ချုပ်ပါဆိုမှ သူ့ထက်ကြီးတာရှိအုံးမလားလို့နော့။ အဲဒါနဲ့ ရုံးဖွင့်ရက်ရုံးချိန်ကို သားအမိနှစ်ယောက်သွားပါတယ်။ တကယ့်ကိုကြီးမားခန့်ညားတဲ့အဆောက်အအုံပါ။ အထဲမှာလဲ နံရံအပြည့်ပန်းချီတွေဆွဲထားပါတယ်။ အလံတွေခေါင်းပေါင်းတွေ နဲ့ချီတက်နေပုံတွေ၊ ဆုယူနေပုံတွေ၊ ဆုရသူတွေ၊ ဆုတံဆိပ်တွေ၊ အရမ်းကိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ တကယ့်ကိုအားတက်စရာပါ။ နံရံမှာလဲအကြီးကြီးရေးထားသေးတယ်။ ဘာတဲ့ မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာသို့ တဲ့။ ကျွန်မတောင်စိတ်ကူးယဉ်လိုက်သေး ငါ့သားများသေချာလေ့ကျင့်လိုက်ရင်လက်ရွေးစင်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လို့။ :hint: သူ့ဆိုင်းဘုတ်ကအားရစရာကိုး။ အလံတွေကလဲအများကြီးတွေ့တယ်။ လူတော့တယောက်မှမတွေ့ဘူး။ အရှေ့မှာ စားပွဲလေးမှာအသက်ငါးဆယ်လောက် တစ်ယောက်ထိုင်နေတာတွေ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်လဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ သူ့ပဲတွေ့တော့သူ့ပဲမေးရတော့တာပေါ့။ သူကသတင်းစာဖတ်နေတာပါ။ ကျွန်မက ကျွန်မသားက ဒီမှာကြက်တောင်ရိုက်ချင်လို့ အဲဒါဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဆိုတော့ သူက အင်း Club ၀င်ရမှာပေါ့တဲ့။ ဟုတ်လား အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ သူ့ဖုန်းမည်လာပါတယ်။ သူကလဲဖုန်းဖွင့်ပြောနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုလုံးဝ ( လုံးဝ ) အဖက်မတန်သလိုပါပဲ။ ထိုင်ခုံနှစ်လုံးရှိပါတယ်။ ထိုင်ပါတခွန်းမပြောပါဘူး။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာမှာ လူကြီးလက်မှတ်ရဖို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့စောင့်နေရသလိုခံစားချက်ပါ။ တကယ့်ကိုအဲလိုခံစားရပါတယ်။ အကြာကြီးဖုန်းပြောပြီးတော့ ဘာလုပ်ချင်တာလဲတဲ့။ ကျွန်မထပ်ပြောပါတယ်။ အဲတော့ အစောက Club ၀င်ရမယ်လို့ပြောတဲ့သူက မသိဘူးတဲ့။ ညနေ ၅ နာရီနဲ့ ခြောက်နာရီကြားမှလာတဲ့။ ဟင်ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ လူတွေကအဲဒီကျမှလာတာမို့ သိချင်ရင်အဲအချိန်ကျမှလာတဲ့။ Club ၀င်ဖို့ရောဘာတွေလိုလဲဆိုတော့မသိဘူး အဲချိန်ကျမှမေးတဲ့။ ဘုရား။ အဖွဲ့ချုပ်နာမည်တပ်ထားပြီး လူတစ်ယောက်မှမရှိ၊ တကယ့်ကိုတိတ်ဆိပ်လွန်းပြီးတာဝန်မဲ့လွန်းတယ်လို့ခံ စားရပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ Sea Game အတွက်တာဝန်ကျနေတယ်ဆိုရင်တောင် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီမှာ မျိုးဆက်သစ်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးနေသင့် တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုဟာက နိုင်ငံတော်ပိုက်ဆံ ( တကယ်တော့ ကျွန်မတို့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ပိုက်ဆံ ) တွေနဲ့ အရမ်းခမ်းနားတဲ့အဆောက်အအုံကြီးဆောက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေရေး ပြီးတော့မှ တကယ်လေ့ကျင့်ချင်လို့သွားမေးတော့မှ ဘာမှမသိဘူးပြောလွှတ်တာဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ အဲလိုနည်းနဲ့ ဘယ်တော့များမှ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းတွေးမိပါတယ်
ဒီစာကိုမန့်ပြီါ် submit လုပ်လိုက်တာ အလိုလို log out ဖြစ်သွားလို့ နောက်တစ်ခါပြန်ဝင် ပြန်ဖတ် ပြန်မန့်လိုက်ရပါသည်.
အစအဆုံး၂ခေါက်ဖတ်ပြီး အောက်ကမျက်ရည်လည်ရွဲပုံလေးကြောင့်ရီစရာမပါပဲ ရီမိပါသေးသည်။
နောက်ကိုမှတ်ထားပါမွသဲရေ အက်လိုတွေတခမ်းတနားလုပ်ထားလေ ဘယ်သူနဲ့ဂျိုင်းရမှန်းမသိလေ မျက်နှာငယ်နဲ့သာနေပေရော့။ပိုက်ပိုက်များများပေးရတဲ့ ပုတ်ဂလိဂတွေဆီသွားလိုက်ပါ။
အပေါ်ကဆောင်ပုပ်ကြီးကတော့ ငယ်ငယ်ကဘင်ခရာတီးဝိုင်းနဲ့ခဏခဏဖွင့်ပွဲတွေကနေရလို့ နုတ်တွေတောင်အလွတ်ရနေပြီ
တကယ်ပါ ရီရအခက်ငိုရအခက်နဲ့ပြန်လာရတာပါ။ သားကထွက်လာတော့ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာသို့ လို့ရေးထားတယ်မေမေရဲ့တဲ့။ သူပြောလို့ ဒီပိုစ့်ကလေးရေးမိလိုက်တာပါ။ နောက်များဆိုတော်ပါပြီ
သြော် မသဲရေ အဖွဲ့ချုပ်ကလူတွေ မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာသွားဖို့ ဗီဇာသွားတိုးနေတာနေမှာပေါ့
အဲလာက မွသဲ က သားဂလေးကို ခေါ်သွားဒါဂိုးးးးးးး
နောက်ခါသွားရင် ၁၈ နှစ် သာမီးလေးကို နီးစပ်ရာက အဖော်ခေါ်သွားးးးး
အားကစားဘောင်းဘောင်းနဲ့ စွတ်ကျယ်လေး ဝတ်လာခိုင်းလိုက်။
ဒီ သာမီးလေးရော အပ်ချင်လို့ပါပြောပြီး အပ်ပေါ့လို့။
အဖွဲ့ချုပ်ခြင်း မှားနေဗီဗျ…. ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဂ အဖွဲ့ချုပ်မှာ သားလေးကို သွားအပ်ရမှာ…။ လွှတ်တော် မအပ်ကြီး ဖြစ်မှာနော… အဲဒကြမှ ကြက်တောင် ချံပီယန် သာမီးလေးတယောက်ကို ဆွဲစိခိုင်းလိုက်… ပြီးမှ တဝဂျီး လေ့ကျင့်ဂျ… ဖုံး ဒိုင်း ဂွမ်း…
တကယ်တန်းက “ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး” ဆိုတာကိုပြတာပဲလေ :angry:
သများ ကျူရှင်မပေးရင်လည်း မကောင်းးးးးး
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့အထိ တရုတ်တွင် ပူးတွဲလေ့ကျင့်နေ
Chinese experts provide technical support for Myanmar to host SEA Games
China Pledges Support to Myanmar’s Hosting of SEA Games
Myanmar, China launch cooperation project on SEA Games
Chinese Embassy in Myanmar – Yangon, Burma – Organization | Facebook
On2September, Myanmar and China launchedacooperation project regarding the 27th Southeast Asian Games to be staged by Myanmar in December this year.
Such cooperation project would help secure friendship between Myanmar and China, Myanmar’s Minister of Culture U Aye Myint Kyu said, adding that the authorities concerned are making all-out efforts for successful delivery of the 27th SEA Games in line with international standard.
Under the cooperation scheme, China will provide assistance to Myanmar in training athletes and producing the opening and closing ceremonies of the SEA games as well.
According to the program, Wuhan, Changsha, Kunming have been selected as training bases for Myanamr’s athletes, andagroup of 26 Chinese coaches came to Myanmar last December to help conduct intensive training in 13 sports.
The 27th SEA Games will be held in Nay Pyi Taw, Yangon, Mandalay and Ngwesaung beach from Dec.11 to 22, withatotal of 1,557 medals — 460 gold, 460 silver and 637 bronze up for grabs.
တော်ဇမ်းဗာ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးရာ… တရုတ်ဆီဂပဲ သင်ရအုံးမယ်လို့..။ ဒဂယ်တော်ဒယ်ဆို မြန်မာနဲ့တရုတ် ကြေးအိုးပြိုင်ချက်မလား… အလဂါး တရုတ်ကြီး အီကြာကွေးလေး ကြော်တတ်ယုန်နဲ့ ယူအက်စ်နဲ့ယူရုတ်ကို အကြွေးနဲ့သိမ်းမယ် အိမ်မက်မက်နေသေးဒယ်.. ဟေ့… မင်းဒို့မသိမ်းဂင် ကူမြူနစ်ကေဒါ ဝစစ်တပ် နိုင်ငံရေးမှူး ကြေးမုံဂျီး (ခ) အီတွန့်ဗွမ်ဂို ကြောင်ကြီး အရင်သိမ်းမဟေ့…. လာ.. မောင့်ကြေးမုံဂျီး သွားဂျဇို့.. ဆီဒိုးနားဂို..
တရုတ်ဆီကသင်ဆိုလို့ အခုဆီးဂိမ်းတောင် တရုတ်က တရုတ်မ ခုနှစ်ယောက်လားမသိဘူး ခေါ်လာပီး မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုပ်ပေးပြီး ဘတ်စ်ကက်ဘောမှာ မြန်မာဆိုပြီးဝင်ပြိုင်ခိုင်းမလို့ကြံကြသေးတယ်။ နောက်သူတို့အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ပြီး တရုတ်မတွေတရုတ်ပြည်ပြန်ပို့လိုက်လို့။ မဟုတ်လို့ကတော့အရှက်ကွဲအုံးမှာ
အဖွဲ့ ချုပ်တစ်ခုလုံးမှာ လူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့